IPhone 2019 kuma yeelan doono TrueDepth kamarada dambe | Wararka IPhone
Ming-Chi Kuo wuxuu aaminsan yahay in iPhone 2019 uusan yeelan doonin kamarad dhab ah oo TrueDepth ah
Waqtigaan wali ma ogin macluumaad rasmi ah oo ku saabsan iPhone 2018 kaas oo lagu soo bandhigi doono 19 fiidnimo dhacdo gaar ah oo ka dhici doonta Apple Park. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira macluumaad badan la sifeeyey saacadihii ugu dambeeyay. Falanqeeyayaasha kale, sida Ming-Chi Kuo waa - daabacaadda warbixinnada iPhone 2019, kuwa aan arki doono sanad gudihiis.
Waa xilli hore laakiin ma seegi karno warbixinnadan maadaama Kuo sida caadiga ah uu leeyahay heer aad u sarreeya oo ku dhaca wax kasta oo khuseeya Apple. Warbixinta wuxuu ku xaqiijinayaa in IPhone 2019 kuma yeelan doono nidaamka TrueDepth kamaraddiisa dambe maxaa yeelay waxay awood u yeelan doontaa inay hesho natiijooyinka uu rabo macmiilku kakan la'aan, iyo sababo kale.
Tiknoolajiyada Apple diyaar uma noqon doonto TrueDepth ee iPhone 2019
Nidaamka kamaradaha adag TrueDepth Waxay ku taal dhinaca hore ee iPhone X. Waxay u taagan tahay haysashada daraasiin dareemayaal ah oo mas'uul ka ah ururinta dhammaan noocyada macluumaadka mawduuca ku hor yaal kamaradaha, gaar ahaan nidaamka Aqoonsiga Face-ka. Mid ka mid ah furayaasha dhismaha ayaa ah kamarad infrared Waxay u soo saartaa 30.000 dhibcood infrared wajiga mowduuca. Nidaamku wuxuu akhriyaa khariidadda dhibcaha la helay oo wuxuu ku habboon yahay khariidadda lagu abuuray Face ID. Haddii isbarbardhiggu yahay mid wanaagsan, iPhone waa la furayaa.
Ming-Chi Kuo wuxuu ku xaqiijiyay warbixintiisa cusub in IPhone-yada 2019-ka ma lahan kamaradaha TrueDepth dhabarka dambe ee iPhone-ka 2019. Bilowgii sanadka waxaa jiray warar xan ah oo dhowr ah oo uumi baxayay in laga yaabo inay jiri kartooni seddexaad xaga dambe ee iPhone 2018, laakiin way luminayeen awoodooda waxaana hubnaa inay heystaan ​​kaliya labo kaamiro gadaal ah .
Maxaad ugu keeni weyday TrueDepth dhabarka iPhones? Dhowr sababood oo muhiim ah iyo in Kuo uu ku sharaxay warbixintiisa. Marka ugu horeysa, in la qaado tiknoolajiyaddan nidaam ka casrisan ayaa lagama maarmaan ah maaddaama xaddiga macluumaadka ay soo ururiyeen kaamirooyinka gadaal ay ka sarreeyaan kuwa hore, abuurista kaamiro infrared ah oo cabirradani waxay culeys ku noqon doontaa Apple.
Marka labaad, algorithms-ka hadda jira oo ku saleysan shabakadaha neerfaha iyo khariidadaha IPhone-ka 2017 waxay waxtar u leeyihiin dadka isticmaala taasi waa waxa ay doonayaan, waxaa laga yaabaa inaysan rabin nidaam kamaradeed oo isku dhafan haddii waxa ay hadda la kulmaan baahidooda.
Ugu dambeyntii, haddii aad rabto inaad sameyso, farsamada Kuma filna bislaansho in loo geeyo iPhone 2019 mudadaas kooban. In kasta oo muuqashadeeda iPhone-ka aan meesha laga saarin, Kuo wuxuu hubaa inuusan ka soo muuqan doonin iPhone-ka sanadka soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Ming-Chi Kuo wuxuu aaminsan yahay in iPhone 2019 uusan yeelan doonin kamarad dhab ah oo TrueDepth ah
Kaydka Apple Store Online wuxuu xiraa kahor imaanshaha alaabada cusub
Spigen wuxuu sii wadaa inuu sifeeyo faahfaahinta iPhone cusub 2018